Global Voices teny Malagasy » Colombia: Andro Tsy Misy Fiara Ao Medellín · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Febroary 2018 3:35 GMT 1	 · Mpanoratra Cati Restrepo Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Amerika Latina, Kolombia, Hevitra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Nankalaza ny Andro Tsy Misy Fiara ny tanànan'i Medellín tamin'ny 22 aprily, hetsika izay nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Kaominina, Fifanekena faha-21 tamin'ny taona 2008. Mampiseho fandinihana mifototra amin'ny hevitra fikarakarana ny tontolo iainana ity hetsika ity ary mifanojo amin'ny fankalazana ny Andron'ny Tany .
Araka ny voalazan'ny bilaogy Movilidad al Día [es], ny “Andro tsy misy fiara” dia hetsika tsy ankalazaina fotsiny any Medellín, fa misy koa any an-tanàna maro manerana izao tontolo izao. Niresaka momba ny tanjona napetraky ny Fitantanan'ny Kaominina amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika  ihany koa ny bilaogy:
Nametraka ireto tanjona manaraka ireto ny fifanarahana Kaominina (21 tamin'ny 2008 an'ny Filankevitr'i Medellín): mampihena ny loton'ny tontolo iainana vokatry ny tabataba sy ny etona maloto avoakan'ny fiara mandeha motera; mampihena ny isan'ny lozam-pifamoivoizana ao an-tanàna; mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fihodinan'ny fitateram-bahoaka; manentana momba ny olana mifandraika amin'ny fampihenana ny fampiasana ny fitateram-bahoaka; mampiroborobo ny safidy hafa amin'ny famindrana toerana harena voajanahary maro sy tsy mandratra olona loatra, ny aro-loza eny an'arabe sy ny fahasalamana, ho toy ny adidy fototra ataon'ny olom-pirenena.
Araka ny voalazan'ny E-Verde [es], bilaogy momba ny tontolo iainana, nitatra tany amin'ny kaominina hafa ivelan'ny faritra itatr'i Medellín  ny hetsika tamin'ity taona ity, anisan'izany i Envigado, Bello, ary Itagüí.
Tao amin'ny bilaogy En Journalism 999 [es], manoratra momba ny tombontsoa sy ny voka-dratsin'ny  andro tsy misy fiara i Heidi Yohana Tamayo Ortiz:
Nisy fiantraikany teo amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara na toerana fiambenana fiara izany:
“Amin'ny andro mahazatra, mandray vola iray tapitrisa pesos eo ho eo (500 dolara Amerikana) izahay, saingy androany, 40 000 pesos (20 dolara Amerikana) fotsiny no noraisinay,” hoy i Luis Alfonso Ríos Villa, mpiasa ao amin'ny Foibe Vaovao Fiantsonan'ny Fiara La Alpujarra.
500″ Sarin'arabe foana ao Medellín, avy amin'ny e-verde, lisansa Creative Commons.
Manao ahoana indray ny fiantraikany eo amin'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka?
Ankoatra izay noeritreretina, tsy dia misy ny fiovana ho an'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka sy fiara iombonana. Raha ny marina, mihevitra ny sasany fa mbola ratsy kokoa ny andro fiasana amin'ny fotoana sasany.
Ny fiantraikany eo amin'ireo mpitondra fiarakaretsaka:
Ny mpamily fiarakaretsaka angamba, dia anisan'ny nahazo tombony be indrindra nandritra ny andro. Araka ny antontan'isa nomen'i Marta Suárez, sekretera lefitry ny Fitaterana sy ny Fiampitàna, nitatitra ny orinasa Taxi Individual fa nandray antso 13 800 avy amin'ireo mpandeha fiarakaretsaka izy, raha amin'ny andro mahazatra, antso 7000 ihany no voarainy. Nisy orinasa hafa nitatitra tarehimarika mitovy amin'izany koa.
Ahoana no fahitan'ny fikambanana misahana fitaterana ny hetsika?
“Amin'ny ankapobeny, andray anjara tamin'ny fepetra ny ankamaroan'ny olona. Na izany aza, nisy ny sasany tsy nanao izany. Nisy ireo nilaza fa tsy fantany ny hetsika, saingy toa mahagaga izany, satria niely tamin'ny alalan'ny media ny hetsika,” hoy i Rosenberg Ríos Aguirre, mpanara-maso ny fivezivezena ao Medellín.
Nisy ihany koa ireo olona tsy nanaraka ny fepetran'ny andro:
Ireo olona izay tsy nanaraka ny fepetra dia takiana hanatrika ny foibe fianarana, izay ny tontolo iainana no lohahevitra. Ao anatin'ny 15 andro, toerana 6 no hapetraka hanaovana ny resaka. Hosaziana handoa onitra ireo izay tsy manatrika.
Mpisera Twitter Tips El Colombiano (@ tips9333) nanoratra momba ny fomba nandanian'ny fianakaviana iray ny andro manontolony  (miaraka amin'ny sary):
Farany, Juan David Escobar avy ao amin'ny bilaogy Reticente [es], mizara ny eritreriny “Medellín amin'ny andro tsy misy fiara”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/12/114779/
 Niresaka momba ny tanjona napetraky ny Fitantanan'ny Kaominina amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika: http://movicity.blogspot.com/2010/04/el-dia-sin-carro-un-espacio-de.html
 nitatra tany amin'ny kaominina hafa ivelan'ny faritra itatr'i Medellín: http://verde.e-lexia.com/?p=80
 manoratra momba ny tombontsoa sy ny voka-dratsin'ny: http://heidiyt.blogspot.com/2009/04/la-realidad-del-dia-sin-carro-en.html
 ny fomba nandanian'ny fianakaviana iray ny andro manontolony: http://twitter.com/tips9333/status/12641364150